Nchịkọta ihe osise ga-adịrịrị maka nchọnchọ, ekwentị mkpanaaka na ntụgharị mgbanwe | Martech Zone
Mgbe ndị na-ese ihe nkiri na ndị na-ese foto sere onyinyo ikpeazụ ha, a naghị arụ ọrụ nke ọma iji belata nha faịlụ. Mkpokọta eserese nwere ike belata nha faịlụ nke onyonyo - ọbụlagodi 90% - na-enweghị mbenata ogo na anya. Mbelata faịlụ nke onyonyo nwere ike ịnwe ọtụtụ uru:
Oge Ibu Ibu Ngwa - Ibufe otu peeji ngwa ngwa amarala inye ndị ọrụ gị ahụmịhe kachasị elu ebe ha na-agaghị enwe nkụda mmụọ, ha ga-etinye aka na saịtị gị ogologo oge.
Ọchịchọ Ọchụchọ Dị Mma - Google hụrụ saịtị ngwa ngwa, yabụ karịa oge ị nwere ike ịpịpụ oge nke saịtị gị, nke ka mma!
Conbawanye mgbanwe mgbanwe - saịtị ngwa ngwa tọghata mma!
Idebe Igbe Dị Mma Ka Mma - ọ bụrụ n’ị na-enye nnukwu onyonyo site na saịtị gị n’ime email gị, ọ nwere ike ịkwaga gị na folda junk karịa igbe mbata.
N'agbanyeghị onye ahịa, ana m agbakọ ma bulie ihe oyiyi ha elu ma hụ mmelite na ọsọ peeji ha, ogo, oge na saịtị, na ọnụego ntụgharị. Ọ bụ n'ezie otu n'ime ụzọ kachasị mfe iji mee ka njikarịcha nwee ọmarịcha ego ma nwekwaa ezigbo ego.
Etu esi ewepu iji ihe onyonyo
E nwere ọtụtụ ụzọ iji leverage zuru oke na onyonyo n'ime ọdịnaya gị.
họrọ nnukwu ihe oyiyi - ọtụtụ mmadụ na-elelị mmetụta nke nnukwu onyonyo iji gafee ozi… ma ọ bụ ozi eserese (dị ka isiokwu a), eserese, na-akọ akụkọ, wdg.
Kọmpụ ihe oyiyi gị - ha ga-ebu ngwa ngwa mgbe ha na-ejigide ogo ha (anyị na-akwado Kraken ọ nwere nnukwu ngwa mgbakwunye WordPress)
Na-ebuli ihe oyiyi gị elu aha faịlụ - jiri isiokwu nkọwa dị mkpa maka onyonyo ma jiri dashes (ọ bụghị gosi) n'etiti okwu.
Na-ebuli ihe oyiyi gị elu utu aha - a na-ekpuchi utu aha na ihe nchọgharị nke oge a na ụzọ dị mma iji tinye oku na-arụ ọrụ.
Na-ebuli ederede gị ọzọ (ederede alt) - alt ederede mepụtara maka nnweta, mana ụzọ ọzọ dị mma iji tinye mkpụrụokwu dị mkpa na oyiyi ahụ.
njikọ ihe onyonyo gị - Ọ na - eju m anya site na ọnụọgụ ndị na - arụsi ọrụ ike ịtinye ihe onyonyo mana hapụ njikọ nke enwere ike iji chụga ndị ọzọ gaa na peeji ọdịda ma ọ bụ oku oku ọzọ.
Tinye ederede ka ihe oyiyi gị - ndị mmadụ na-adọta ihe oyiyi, na-enye ohere tinye ederede dị mkpa ma ọ bụ oku na-aga iji mee ka mmekọrịta dị mma.
Tinye foto na gị Sitemaps - anyị na-akwado Egwu Math SEO ma ọ bụrụ na ị nọ na WordPress.
Tinye n'ọrụ anabata oyiyi - vector dabeere na oyiyi na tinye n'ọrụ srcset gosipụta otutu, kachasị onyonyo onyogho, ga-ebu ihe onyonyo ngwa ngwa dabere na ngwaọrụ ọ bụla dabere na mkpebi ihuenyo.
Buru ihe oyiyi gị site na a netwọk nnyefe ọdịnaya (CDN) - saịtị ndị a na-geographically emi odude na ga-adịru nnyefe nke gị ihe oyiyi gị ọbịa 'nchọgharị.
Ntuziaka Ndọtị Ihe Nlekọta Weebụsaịtị
Ihe omuma a zuru oke site na weebụsaịtịBuilderExpert, Ntuziaka Ndọtị Ihe Nlekọta Weebụsaịtị, na-agagharị na uru niile nke mkpakọ ihe na njikarịcha - gịnị kpatara o ji dị oke egwu, njirimara ụdị okike, na usoro nke njikarịcha onyonyo.
Kraken Image mkpakọ Platform
Y’oburu n’acho onu ngwangwa n’ime oge ibu gi, bia choo Kraken, otu n'ime ọrụ kacha mma na net! Anyị agbalịrị ọrụ ndị nweere onwe anyị n'oge gara aga - mana nnukwu eserese anyị na-adịkarị oke nha faịlụ maka ọrụ ha - ụdị ụdị mmeri ahụ!
Kraken nwere ntanetị zuru ezu, API siri ike, yana - na - ekele - ngwa mgbakwunye WordPress! Ihe mgbakwunye ahụ na-enye gị ohere ịkwalite na-akpaghị aka mgbe ị bulite yana nnukwu ebuli onyonyo ndị ọzọ ị kwadoro na mbụ. Nsonaazụ ahụ dị ịtụnanya:
Ma, ọ bụrụ na ị bụ ụlọ ọrụ, ọrụ Kraken na-enye ọtụtụ igodo API ka ị nwee ike ijikọ ọtụtụ ndị ahịa na ọrụ ahụ
Debanye aha maka Kraken
Naanị ihe edeturu, anyị na-eji nke anyị Njikọ njikọ mmekọ Kraken na post a! Olileanya ị sonyere ma rite uru.
Tags: mkpado altederede altcdngoogle saịtị ọsọimage mkpakọaha faịlụ oyiyiogo njikarịchaonyonyo njikarịcha nduoyiyi njikarịcha ihe oyiyioyiyi resizeihe osiseisi okwu onyonyoiche n'echichekrakenebuli ihe oyiyiihu peejiihe ngosi onyonyoAseo njikarịchaobere mkpirisiọsọ ọsọsrcsetobere pngNtuziaka njikarịcha weebụwebụsaịtịbuilderexpertwordpress image mkpakọnha onyoghodawordpress kraken ngwa mgbakwunyewp kporo